राष्ट्रियसभा सदस्यको चुनाव माघ ९ गते हुने - TodayKhabar
राष्ट्रियसभा सदस्यको चुनाव माघ ९ गते हुने
काठमाडौं– राष्ट्रियसभा सदस्यको चुनाव आगामी माघ ९ गते हुने भएको छ ।
विभिन्न दलका १८ जना सदस्यको पदावधि सकिने भएपछि सरकारले माघ ९ गते चुनाव गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले विहीवार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा राष्ट्रियसभा सदस्यको चुनाव आगामी माघ ९ गते हुने बताएका हुन् ।
उनन्साठी सदस्यीय राष्ट्रियसभाका १९ जनाको आगामी फागुन २० गते पदावधि सकिँदैछ ।
रिक्त १९ सदस्यमध्ये १८ जना निर्वाचनको माध्यमबाट चयन हुनेछ भने एकजना सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुनेछन् । राष्ट्रियसभाको सदस्यको पदावधि सकिनुभन्दा ३५ दिनअगाडि नै निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
राष्ट्रियसभाका सदस्यको पहिलो पटक एक तिहाइ सदस्यको पदावधि दुई वर्ष, अर्को एक तिहाइको चार वर्ष र बाँकी एक तिहाइको छ वर्षमा पदावधि समाप्त हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
को–कसको पूरा हुँदैछ दुईवर्षे कार्यकाल ?
अर्थमन्त्रीसमेत रहेका राष्ट्रियसभा सदस्य डा युवराज खतिवडाको स्थानमा रिक्त हुने पदमा भने राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने छ । उनी यसअघि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनीत भएका थिए । फागुन २० मा दुईवर्षे कार्यकाल पूरा गर्ने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नौ, नेपाली काँग्रेसका सात, राजपाका दुई र समाजवादी पार्टीका एकजना छन् ।
राष्ट्रियसभा सदस्यका मतदाता गाउँपालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख, प्रदेशसभाका सदस्य हुन् । यो निर्वाचनमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने अर्थात् धेरै मत प्राप्त गर्ने नै विजयी हुने निर्वाचन प्रणालीबाटै उम्मेदवारको चयन हुनेछ ।
राष्ट्रियसभाको आगामी निर्वाचनबाट महिला सात, दलित दुई, अल्पसङ्ख्यक दुई र अन्य सातजना निर्वाचित हुनेछन् । सङ्घीय संसद्को माथिल्लो सभाका रुपमा रहने राष्ट्रियसभामा समाजका विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्‍याएका प्रबुद्ध व्यक्तिको प्रतिनिधित्व हुने संविधानले परिकल्पना गरे पनि कतिपय परिपक्व नभएका राजनीतिक कार्यकर्तालाई स्थान दिँदा संविधानको भावनाअनुरुप सभाको गरिमा कायम हुन नसकेको भनी आलोचना हुँदै आएको छ ।
बाँकेमा दुईजना कोरोना संक्रमितको मृत्यु
गाउँपालिका अध्यक्ष अपहरणकारीको कब्जामा, पत्नीलाई छाडे
औपचारिक रुपमै भ्रमण बर्ष रद्द गर्ने तयारी
लकडाउन ८ दिन थप्ने सरकारको निर्णय: चैत २६ गतेसम्म पुर्‍याउने निर्णय
मधेसमा सुरक्षा नीति विवाद: सरकारको नाममा परमादेश जारी
प्रदेश २: मुख्यमन्त्री एक्सनमा, राजपाका ३ मन्त्री हाटाउने तयारी
हालसम्म १६ देशमा १ सय ९२ जना नेपालीको विदेशमा कोरोना संक्रमणबाट निधन
Inside Story: उपसभामुख डा. तुम्बाहाम्फे कुन सक्तिको आडमा राजिनामा नदिने अड्डि कसेकी हुन ?